Warshadaha Shiinaha iyo Warshadda Baarashada Wayn ee Shiinaha Jiake
Qaab No.: CS-A, CS-B, CS-C
Mashiinka xarkaha xawaaraha sare ee jiake Mashiinka Jiake wuxuu bixiyaa xalka ugu fiican samaynta silig Barbed
Mashiinnadayada siligga ku xiraya iyo makiinadaha silig ku xiraya way fududahay in la shaqeeyo, waxay si weyn u kordhin karaan waxtarka wax soo saarka, waxayna ku habboon yihiin soo saarista noocyo kala duwan oo mesh silig nabadgelyo leh.
Saddex nooc: qalloocan oo caadi ah, xarig keliya, laab laab laab ah
Waxyaabaha ceeriin: silig galvanized, PVC silig dahaarka leh, iwm
Hal shaqaale ayaa ku shaqeyn kara mashiinno badan:
Hal saac ayaa soo saari kara 70KG / 40KG / 50KG:
Mashiinka Samaynta Dabka ee Barbed wuxuu soo saaraa silig jiifa. Xarkaha loo yaqaan 'Barbed siligga' waxaa loo isticmaalaa isticmaalka ilaalinta, xayndaabka ciyaarta, daaqa xoolaha ama xadka qaranka, difaaca qaranka, beeraha, xoolaha, warshadda, iwm. Waxaan had iyo jeer ku haynaa naqshadeynta xirfadeed ee ugu wanaagsan iyo tikniyoolajiyada waxsoosaarka mashiinka siligga baraf badan sanado badan.
Waxaan soo saarnaa seddex nooc oo mashiinka xayndaabka siligga leh: CS-A waa mashiin silig xaddidan oo qaloocan oo caadi ah; CS-C waa mashiinka siligga siligga ah ee labalaabma; CS-B waa mashiin bir-goys ah oo keliya.
Moodel CS-A CS-B CS-C
Dhexroor xargaha ugu weyn 1.5-3.0mm 2.0-3.0mm 1.6-2.8mm
Dhexroor silig isku xidhan 1.6-2.8mm 1.6-2.8mm 1.6-2.2mm
Meel bannaan 3 ”, 4”, 5 ” 4 ”, 5” 4 ”, 5”
Lambarka qaloocan 3-5 7
Gawaarida 2.2kw 2.2kw 2.2kw
Waxyaabaha ceeriin Silig galvanized ama PVC silig dahaarka leh. Fiilo fidsan Fiilo fidsan
Soosaarid 70kg / saac, 25m / min 40kg / saac, 18m / min 50kg / saac, 18m / min
Wadarta miisaanka 1050KG 1000KG 1050KG
Cabbirka xirmada 5.9CBM 5.8CBM 5.9CBM
Qalabka gacanta ku rakibida, Fudud oo dejinta;
Daboolka birta ee gaariga wadista ee loogu talagalay hawlgalka badbaadada;
Keydinta agabka iyo awoodda sare;
Xisaabiye si loo tiriyo tirada baararka oo loo xisaabiyo dhererka silig siligga leh.
Batoonka Bedelashada iyo leveler si uu u bilaabo una joojiyo mashiinka si fudud.
Soo saar dhaqso ah oo fudud oo ka yimid mashiinka.
Nidaamka hagista si looga fogaado in siligga dabka dhaliya.
Xarkaha loo yaqaan 'Barbed siligga' waxaa loo isticmaalaa isticmaalka ilaalinta, xayndaabka ciyaarta, quudinta xoolaha ama xayndaab heer qaran ah, difaaca qaran, beeraha, xayawaanka xoolaha, iwm.